हबलदारको गुण्डागर्दीबारे एसपी अनभिज्ञ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७६ कार्तिक १०, आईतवार ०७:४९ गते
भरतपुर । भरतपुर अस्पतालको पोस्ट मार्टम कक्षमा कार्यरत दुई कर्मचारीलाई अस्पतालमै रहेका प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको घटनामा चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन् ।
कात्तिक ७ गते बिहानको समयमा अस्पतालमा भएको घटनाबारे ९ गते शनिबारसम्म पनि उनी जानकार रहेनछन् । घटनाबारे प्रहरीमा ८ गते पीडितको तर्फबाट उजुरी परिसकेको छ । हबलदारबाट भएको कुटपिट घटना विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समेत सार्वजनिक भइसक्दा एसपीले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका हुन् ।
शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हातै भाँचिने गरी प्रहरीबाट भएको कुटपिटमा कारबाही हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्नमा एसपी मल्लले भने, कुन घटना ? मलाई त केही पनि थाहा छैन ।’
अस्पतालमा कार्यरत ४९ वर्षका देव आनन्द राई र अर्का कर्मचारी ६० वर्षका पूर्ण विक कुटपिटबाट सख्त घाइते भएका छन् । राईको ढाडमा निलडाम छ भने विकको देव्रे हात भाँचिएको छ ।
बिहीबार बिहान ६५ वर्षीया एक महिलाको पोस्ट मार्टम गर्ने क्रममा कानमा लगाएको गहना चोरी गरेको आरोपमा आफूहरुमाथि लाठीले हानिएको घाइतेहरुको भनाइ छ । प्रहरीमा उजुरी परेको भए पनि हबलदारमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । ‘हामी कारबाहीको प्रक्रियामा छौँ, डीएसपी प्रवक्ता एकनारायण कोइरालाले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले चाडवाड विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत भएको प्रगतिबारे शनिबार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ ।
जुवातास, शान्ति सुरक्षा, ट्राफिकको राजस्व संकलन, लागूऔषध नियन्त्रण, विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्नहरुको गिरफ्तारीको विषयमा जानकारी दिएको छ । चाडवाडको समयमा मात्र १०६ जना मापसे कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै ६ जनाको मृत्यु भएकोमा सबै मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।